Asan'i Tomasy - Wikipedia
Ny Asan'i Tomasy dia soratra kristiana tamin'ny andro taloha izay mitantara ny dia fanatanterahana iraka nataon'ny apostoly Tomasy tany amin'ny fanjakana indo-partan'i Taksila.
Soratra apokrifa mitatitra ny fianinan'i Tomasy nanomboka amin'ny fotoana nahazoany ny anjara fitoriana tany India rehefa avy natao antsapaka ny tany hitorian'ireo apostoly ny filazantsara. Natoky azy ny mpanjaka Godnafara (na Gondnafaresy I) sady nanao fahagagana maro tao izy. Mifarana amin'ny namonoana azy ho maritira araka ny fanapahan-kevitry ny mpanjaka Mazday ny tantara izay narahin'ny fisehoany taorian'ny nahafatesany.
Ireo mpandinika momba ny fampianaran-diso kristiana dia mahatsikaritra "fiviliana" gnostika sy enkratista. Ny nanoratra an'io lahatsoratra io dia hita ho manam-pahalalana an'i India nefa sarotra ny hanaporofo na hitsipaka ny maha mpanorina ny Fiangonan'i Kerala an'i Tomasy araka izay lazain'io soratra io.
Ny tantara hita ao amin'ny Asan'i Tomasy dia loharano nanoratana ny tantaran'i Tomasy ao amin'ny boky atao hoe Ny Tantaran'ny adin'ireo Apostoly, asa soratra izay mitantara ny asa famitana iraka nataon'ireo apostoly sy ny nahafatesan'ny ankamaroan'izy ireo, izay heverina fa nosoratan'i Abdiasy, evekan'i Babilona.
Asan'ny Apostoly (sokajin-dahatsoratra)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Asan%27i_Tomasy&oldid=818867"
Voaova farany tamin'ny 21 Aogositra 2018 amin'ny 12:35 ity pejy ity.